विदेशमा अलपत्र हुनुहन्छ ? यसरी लिनुस् सरकारबाट निःशुल्क टिकट – RemitKhabar
विदेशमा अलपत्र हुनुहन्छ ? यसरी लिनुस् सरकारबाट निःशुल्क टिकट
by Remit Khabar - 19/07/2020 0
४ साउन, काठमाडौं । तपाईं दूतावासहरुले प्राथमिकताको सूचीमा राखेर पनि तपाईं चार्टर्ड उडानको टिकट किन्ने खर्च नपाएर अलपत्र पर्नुभएको छ ? तुरुन्तै दूतावासमा एउटा निवेदन दिएमा अब विदेशमा बेर्खची भएका श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने सरकारले बताएको छ ।
‘खल्ती’ र नेपाल बैंकबीच सहकार्य, बैंक खाताबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने
एकसातामा विदेशमा कोरोनाबाट थप १६ नेपालीको मृत्यु